CIN Khabar अन्तरजातीय विवाह बारे गायक यशकुमारको तीताे र मीठो अनुभव
अन्तरजातीय विवाह बारे गायक यशकुमारको तीताे र मीठो अनुभव
सीआईएन मंगलबार, फागुन ७, २०७५, ०२:२९:००
म त विवाह पछि नै चर्चित भएको हो । उनीसँगको विवाहपछि नै सिर्जना प्रभावकारी बन्न थाल्यो सायद । म लागिपरेको चाहिँ पहिलेदेखि नै हो ।
म चाहिँ मेरो आफ्नो भोगाइलाई दुःख भन्न रुचाउँदिन । त्यसलाई म आफ्नो अनुभव भन्न रुचाउँछु । त्यो त रमाइलो छ । फिल्म हेर्दा एउटा क्यारेक्टरले कसरी उत्कर्षसम्म आउँदा सङ्घर्ष गर्दै ऊ कसरी पार हुन्छ । त्यो अवस्थाको कथाहरु मैले पनि भोगेको छु ।
मेरो छोरा अहिले १४ वर्षको भयो । हामी सबै खुसी र सुखी छौँ । हरेक शनिबारको दिन हाम्रो जमघट ससुराली घरमा हुन्छ । मेरो आमाबुवाको रुपमा सासूससुरा पाएको छु । एकदमै सोझो हुनुहुन्छ, परिवारका सदस्यका लागि जिम्मेवारी बहन गर्ने स्वभावको हुनुहुन्छ । कताकता कस्तो महसुस हुन्छ भने "उहाँहरु न्यूरोडमा भएको हात हालाहालको घटनाका कारणले कतै न कतै पश्चाताप महसुस गरिरहनु भएको छ । "
हैन, भने नि ! जब एउटा छोराले दुःख गर्दै पढ्छ, जब उसले सय प्रतिशत मार्कसले ऊ जब पास हुन्छ, त्यति बेला कति खुसी हुन्छ । भनेको मतलब मेरो लागि त्यो एउटा परीक्षा थियो । जति मैले सङ्घर्ष गरेँ र अन्त्यमा गएर मैले उसलाई प्राप्त गरेँ ।
त्यसमा त अब दुखी हुने त कुरा नै भएन । अहिलेको यो क्षणमा आइपुग्दा हिजोको दिनमा "मेरो छोरीको लागि यो मान्छे त्यति उत्कृष्ट थिएन कि ? पृष्ठभूमि पनि राम्रो छैन ।
न नाम छ, न दाम छ, न त हामीसँग मिल्ने खालको त्यस्तो वर्ग नै छ", भन्ने परिवारले आजको दिनमा मेरो ज्वाइ मध्येको उत्कृष्ट भनेर छाती फूलाएर मेरो नामबाट परिचय गराउनुहुन्छ भने त्यो जति मेरो लागि अरु खुसी केही हुन सक्दैन ।
म सङ्घर्षरत नै थिएँ,उनीसँग भेट भएको चाहिँ २०५५ सालमा हो ।
बागबजारमा नै हो । मेरो साथीले डिजाइनहरु गर्थ्यो । त्यहाँ जानेक्रममा हेराहेर मात्र हुन्थ्यो तर बोलचाल भएको थिएन ।
मैले पहिले रेकर्ड गरेको गीत त्यति चर्चामा थिएन । पछि संयोगबस उनी राई स्कुलमा पढ्थिन्, राई स्कूलमा स्वागत कार्यक्रमहरु हुन्छ । नयाँ विद्यार्थीहरुलाई स्वागत गर्ने, त्यस्तोमा चाहीँ हामी जस्तो नाम नचलेको कलाकारहरुलाई बोलाइन्छ । त्यहीँक्रममा त्यो स्कूलमा भेट भएपछि मैले गीत गाएँ ।
मैले सङ्गीत गरेका गीतहरु गाइसकेपछि, ‘तपाईलाई म देखिरहन्छु नि !’ भनेर भनिन् उनले । त्यसपछि ‘ए हो र, कहाँ ? मैले पनि देखेको जस्तो लाग्यो तपाईलाई’ भने मैले ।
हिजोको दिनमा धरती र आकासबाहेक मसँग केही पनि थिएन । आजको दिनमा मेरो सिर्जनालाई माया गरेर जुन ठाउँमा स्रोताले पुर्याइदिनु भएको छ । म हिजोको त्यही व्यक्ति थिएँ र ? भन्ने लाग्छ । जसलाई बस चढ्दाखेरी पनि पल्लो स्टपसम्म पुग्दाखेरी पैसा नपुग्ने हो कि ? भन्ने व्यक्ति थिएँ । आज म मेरो सफलताको बारेमा तपाईसँग अन्तरवार्ता दिइरहेको छु । यो सबै व्यक्ति म नै हो त ? भनेर फर्कदा बिझाउँछ ।
तपाईले चाहिँ साँच्चिकै देखेर भन्नुभएको थियो कि, त्यतिखेर यत्तिकै भन्नुभयो ?
होइन होइन, त्यो सोच त मेरोमा शून्य प्रतिशत पनि थिएन । किनभने अभावले लखेट्न सुरु गर्छ नि ! त्यो चाहाना, सपना, रहरहरु सबै ओझेल पर्छन् । त्यसमा दोस्रो व्यक्तिले स्थान नै पाउँदैन । आफू कसरी बाँच्ने भन्ने समयमा दोस्रो व्यक्तिलाई थप्दा झन समस्या हुन्थ्यो नि !
‘ए अँ’ भनेपछि परिचय भयो, त्यसबेलामा मोबाइल फोन थिएन । मेरो आउजाउ त ठ्याक्कै उनको घरसँग जोडिएको घरमा थियो । हेराहेर, बोलचाल हुन्थ्यो । उनीलाई शास्त्रीय नृत्य मन पर्ने, पछि स्कुलबाट आइसकेर घर नजिकै नै डान्स क्लास गर्न थालिछन् ।
त्यसैताका मेरो गीतको म्युजिक भिडियो बन्ने कुरा भयो । सुटिङ्का लागि ककनी जाने कुरा भएपछि त्यसमा ककसलाई कोरसमा बोलाइएको छ भन्ने मलाई थाहा थिएन । सन्जोगबस शास्त्रीय नृत्य गर्ने समूहमा उनी पनि परिछन् । डान्स प्रशिक्षकले घरबाट अनुमति लिएर गएका रहेछन् ।
मलाई देखेर उनी पनि छक्क परिछन् । त्यसपछि मात्रै बोलचाल, भेटघाट बढ्न थाल्यो । म पनि उनको स्कूलमा भेट्न जान थालेँ ।
तीन वर्षको बीचमा घरपरिवारले थाहा पाएपछिका उतारचढाव केही थिए कि ?
त्यो पूरै फिल्म नै छ नि ! उतारचढाव त भइ नै हाल्यो नि ! किनभने त्यतिखेर म सङ्घर्ष गरिरहेको थिएँ । मसँग केही थिएन । उनी काठमाडौँमा घर भएको मानिस । त्यसमा पनि नेवार समुदायमा पनि आफ्नै संस्कार छ, संस्थागत भएको समाज छ ।
आफ्नै समुदायमा विवाहबारी हुने चलन छ । त्यसले गर्दा अन्तरजातीय विवाह गर्नु भनेको सानो निर्णय थिएन ।
घरमा गएर माग्न सक्ने हिम्मत पनि मसँग भएन । देखाउन लायक पनि मसँग केही थिएन तर सबभन्दा ठूलो दवाव उनले नै दिईन् आमाबुवालाई र परिवारका सदस्यलाई । उनी एक्लो छोरी भएका कारणले त्यो केटा पाएन भने म जे पनि गर्न सक्छु भनेर इमोश्नल बल्याकमेलिङ सुरु गरिन् ।
म त त्यहाँ देखा नै परिन । ‘काका, मामा, कोको हुनुहुन्छ, उहाँहरुले तपाईलाई भेट्नु भयो भने जे पनि गर्न सक्छन् ।’ भन्थिन उनी । त्यसबीचमा म स्टुडियो जान्थेँ, काम गर्थे । एक दिन अचानक उनैले मलाई गिफ्ट गरेको पेजर थियो, त्यसमा ‘म आउँदैछु ।’ भन्ने म्यासेज आयो मलाई, उनको नाम पनि लेखिएको थियो ।
खै कसरी उनी भागेर म भएको ठाउँमा आइपुगिन् । ‘अब हामी काठमाडौँ नबसौँ, मलाई जहाँ सक्नुहुन्छ लैजानुस्, यहाँ बस्यो भने जे पनि हुन सक्छ ।’ उनले भनिन् । घरबेटीलाई भाडा बुझाउनै समस्या भएको बेला,उनले भने जस्तो सम्भवै थिएन ।
एक वर्षजति बोलचाल भएन । आउनेजाने पनि भएन । फोनमा कुराकानी पनि भएन । देशविदेशमा, पत्रपत्रिका, टिभीमा छाउन पनि थालेँ । त्यसपछि सायद लाग्यो होला, ‘ए छोरीको रोजाइ ठिक नै रहेछ ।’ त्यसपछि सबैले जोजो न्यूरोडमा आउनु भएको थियो कुनै समय छुटाउनका लागि उहाँहरु सबैजना आउनुभयो फेरि जुटाउनका लागि । उहाँहरुले त्यो वातावरण बनाउनुभयो जुटाउनका लागि । आजको दिनमा मलाई उहाँहरुसँग गुनासो छैन ।
मैले के भने ‘एकदमै गाह्रो हुन्छ, रोजगारी छैन ।’ भनेर कुरा गर्दैमा केही दिन बित्यो । त्यसैक्रममा उनको परिवारका सदस्यले हामीलाई भेट्नुभयो । भागेको थाहा पाएपछि ‘आमा बिरामी हुनुहुन्छ, जसरी पनि भेट्नुपर्यो ।’ भनेपछि उनी त भन्थिन् कि ‘नजाउँ, उनीहरुको केही चालबाजी हुन सक्छ ।’ तर मैले आमालाई एकदमै माया गर्ने भएका कारणले सकारात्मक भएँ ।
थिएन, किनभने ‘आमा बिरामी हुनुहुन्छ, खाना खानु भएको छैन ।’ भन्ने म्यासेज आउँथ्यो । त्यो पनि एक प्रकारको बल्याकमेलिङ रहेछ, पछि थाहा भयो । मैलेपछि ‘छोराछोरी, बाआमाको माया सम्वेदनशील हुन्छ ।’ भनेर सम्झाएँ । त्यसपछि काठमाडौँको न्यूरोडमा भेट्ने कुरा भयो । उहाँहरुको योजनाअनुसार झगडा भयो ।
त्यसपछि उनले मप्रतिको जुन माया थियो, त्यहाँ देखाइन् । २०५६ र ५७ बीचको कुरा हो यो । अहिले आएर म बुझ्दै गएँ । मेरो छोरा छ अहिले । आमाबुवाको एउटा छोरी, जसले दुःख गरेर पढाएका छन् । सपना देखेका छन् । अहिलेको जस्तो मेरो स्थिति पहिले भएको भए केही हुन्थ्यो होला ।
त्यो घटना घटेपछि मप्रतिको उनको माया झन् बढ्यो । मेरो बुझाइ के भने बाउआमाले आफ्नो जीवन जीउँदै गर्दा छोराछोरीलाई उनीहरुको आफ्नो तरिकाले बाँच्न दिनुपर्छ ।
उनीहरु के बन्लान् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर सही बाटो देखाउने जिम्मेवारी मात्र बाउआमासँग हुन्छ । जीउने अधिकार त उनीहरुलाई हुन्छ ।
किनभने बाउआमाले रोजेरै दिएकाहरुले पनि त श्रीमान्बाट पीडित छन्, बाउआमाको इज्जतका कारण छोरीहरुले व्यक्त गर्न सकेका छैनन्, भित्र कति पीडित छन् भन्ने बाउआमाले महसुस गर्न सकेका छैनन् ।
त्यही दुई महिनाजति लाग्यो होला । ‘हामीले अर्को केटा रोजेर दिए पनि छोरी खुसी हुँदैन ।’ भन्ने लागेछ सायद, ‘जेजस्तो होस् उही केटालाई दिउँ ।’ भनेर मलाई खबर गर्नुभयो । त्यसपछि मेरो भाउ खोज्ने पालो भयो ।
‘मलाई तपाईको छोरी चाहिँदैन तपईसँगै राख्नुस् भनेँ , मैले तपाईको छोरीलाई जालझेल पनि गरेन, फकाएर कुनै सम्बन्ध पनि राखेको हैन । हो तपाईको छोरी मन पर्यो, हामीले एकअर्काको मन मिल्यो । दुखसुख बाँडेका मात्र थियौँ । ’ भने ।
मेरो लागि त्यो एउटा परीक्षा थियो । जति मैले संघर्ष गरेँ र अन्त्यमा गएर मैले उसलाई प्राप्त गरेँ । त्यसमा त अब दुखी हुने त कुरा नै भएन । अहिलेको यो क्षणमा आइपुग्दा हिजोको दिनमा मेरो छोरीको लागि यो मान्छे त्यति उत्कृष्ट थिएन कि ? पृष्ठभूमि पनि राम्रो छैन । न नाम छ, न दाम छ, न त हामीसँग मिल्ने खालको त्यस्तो वर्ग नै ।
एक वर्षजति बोलचाल भएन । आउनेजाने पनि भएन । फोनमा कुराकानी पनि भएन । तर पछि मैले काम गर्न छोडेको थिएन, म सुरेशकुमारबाट यशकुमार बन्न थालेँ । गीतहरु चर्चित हुन थाले, त्यसपछि अलिकति मैले आफूलाई स्थापित गर्दै गएँ । देशविदेशमा, पत्रपत्रिका, टिभीमा छाउन पनि थालेँ ।
त्यसपछि सायद लाग्यो होला, ‘ए छोरीको रोजाइ ठिक नै रहेछ ।’ त्यसपछि सबैले जोजो न्यूरोडमा आउनु भएको थियो कुनै समय छुटाउनका लागि उहाँहरु सबैजना आउनुभयो फेरि जुटाउनका लागि । उहाँहरुले त्यो वातावरण बनाउनुभयो जुटाउनका लागि ।
आजको दिनमा मलाई उहाँहरुसँग गुनासो छैन, मलाई उहाँहरुबाट गुनासो छैन । जसरी हिरोहिरोइनका बीच आरोहअवरोह आउँछन् र हिरो हिरो नै रहेछ भनेर जसरी सकारात्मक रुपमा कथा सकिन्छ, त्यो एउटा चलचित्रको जस्तो भूमिका खेल्न पाएको छु ।
हिजोको दिनमा धरती र आकासबाहेक मसँग केही पनि थिएन । आजको दिनमा मेरो सिर्जनालाई माया गरेर जुन ठाउँमा स्रोताले पुर्याइदिनु भएको छ । म हिजोको त्यही व्यक्ति थिएँ र ? भन्ने लाग्छ ।
जसलाई बस चढ्दाखेरी पनि पल्लो स्टपसम्म पुग्दाखेरी पैसा नपुग्ने हो कि ? भन्ने व्यक्ति थिएँ । आज म मेरो सफलताको बारेमा तपाईसँग अन्तरवार्ता दिइरहेको छु । यो सबै व्यक्ति मनै हो त ? भनेर फर्कदा बिझाउँछ ।
हजुरहजुर, मेरो छोरा अहिले १४ वर्षको भयो । हामी सबै खुसी र सुखी छौँ । हरेक शनिबारको दिन हाम्रो जमघट ससुसाली घरमा हुन्छ । मेरो आमाबुवाको रुपमा सासूससुरा पाएको छु ।
एकदमै सोझो हुनुहुन्छ, परिवारका सदस्यका लागि जिम्मेवारी बहन गर्ने स्वभावको हुनुहुन्छ । कताकता कस्तो महसुस हुन्छ भने उहाँहरु न्यूरोडमा भएको हात हालाहालको घटनाका कारणले कतै न कतै पश्चाताप महसुस गरिरहनु भएको छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन ७, २०७५, ०२:२९:००